Delivra mandefa tranokala vaovao | Martech Zone
Delivra mandefa tranokala vaovao
Alakamisy Janoary 19, 2012 Alakamisy Janoary 19, 2012 Jenn Lisak Golding
ny mailaka barotra Mpanohana, Delivra, nanangana tranokala vaovao mahafinaritra androany, noforonina sy novolavolain'ireo namantsika sakaiza hafa, SpinWeb, on Fahalalahana Accrisoft. Delivra dia mpanohana ny Martech Zone nandritra ny 3 volana, ary tianay ny miara-miasa amin'ity ekipa natokana ho an'ny mpanjifa sy manam-pahalalana monina any Indianapolis ity.
Ny sehatry ny varotra mailaka an'i Delivra dia manolotra karazan-javatra isan-karazany mifanaraka amin'ny filan'ny mpivarotra, ny mpitantana C, ary ny mpamorona, ao anatin'izany ny fitantanana lisitra, mpamoaka lahatsoratra WYSIWYG, Segmentation, Personalization, Tracking & Reporting, Deliverability, API Fampidirana, fampidirana SMS, fitantanana kaonty, serivisy famolavolana ary fakan-kevitra.
Ny tranonkala dia miavaka amin'ny lozisialy hafa amin'ny maha-tranonkala serivisy azy, manome fomba fijery tsotra momba ny vokatra sy ny tolotra serivisy an'ny Delivra. Izy ireo dia orinasa lehibe manana laza mahatalanjona amin'ny fanaovana tsara ho an'ny mpanjifany, ary ny endrika tranokala vaovao dia mifanandrify amin'ny toetrany mangina, mafy orina ary mahomby.
Tsindrio ny sary eto ambany hitsidihana ny tranokala vaovao mahafinaritra azy ireo ary omeo orinasa vitsivitsy!
Tags: delivraAgence Marketing amin'ny mailakaMpanolo-tsaina amin'ny marketing amin'ny mailakaMarketing amin'ny mailaka tantananaNew WebsiteMarketing amin'ny mailaka matihaninaMpanohana
Ny andraikitsika ara-tsosialy amin'ny media sosialy
Fifanakalozana fakana mailaka miaraka amin'ny ividence